Hezvino Nei Vanhu Vachive Nezvako Zvemukati | Martech Zone
Hezvino Chikonzero Vanhu Vachivenga Zvemukati Zvako
Chipiri, Gunyana 21, 2014 Douglas Karr
Iyo webhu pasina mubvunzo chishandiso chakakosha cheruzivo kune vese vateereri uye zvakakosha kuti ive nechokwadi chekuti zvese zvinoshanda uye zvine simba kuitira kuti vanhu nemabhizinesi vashande. Shanduko yedhijitari iri kuda. Mawebhusaiti anodikanwa kuve akasarudzika, akakodzera uye nyowani uye zvemukati pakarepo zvinoda kuita muverengi. Zvemukati zvinofanirwa kuve zvakapinza, zvinofanirwa kuve zvinomanikidza uye zvinofanirwa kujekesa.
Hazvisi zvekuchengetedza. ndezve kutungamira nzira. Ndosaka uchifanira kuve nhanho imwe kumberi kana zvasvika pakunyora zvirimo uye ndeipi nzira iri nani yekuzviita pane kutendeukira kune vateereri. Simba iri pakupedzisira riri mumaoko avo. Iko hakuna imwe yemukati marongero anoshanda kune vese, inoda kuve tsika yakagadzirirwa kune yega yakatarwa vateereri. Vanhu vane zvakasiyana zvavanoda uye ndosaka zvakakosha kuti uwane zvakawanda nezve izvo zvinodiwa sezvinobvira.
Ndosaka pakupedzisira takaita ongororo iyi - Taida kutsvaga zvinofarirwa nevanhu, vasinganakirwe, zvavanofarira uye nezvavasingade kana zvasvika paWorld Wide Web. Ongororo iyi yakaitwa pavanhu mazana manomwe negumi nemaviri vane makore gumi nemasere kusvika makumi matanhatu neshanu + uye ndipo patakakwanisa kunyatso tsvaga zvinoita zvakanaka zvemukati zvakanaka nezvakaipa. Iyo data yakaita seiyi iyo inobatsira Stratton Craig kugadzira kopi, kubva e-commerce kuenda kublog mablog uye inogona zvakare kukubatsira iwe. Stratton Craig
Mamwe manhamba anonakidza akawanikwa, pamwe chete nezvimwe zvinoshamisa zvakare. Waizviziva here:
Zvemagariro midhiya zvemukati inonyanya kukosha kumazera ekare?
Your yemubatanidzwa blog haisvike makore 18-24 ekuberekwa.
Chete 2 pavanhu 712 nakidzwa nekutenga pamhepo!
Stratton Craig ikambani yakanyorwa yekutaurirana ine mahofisi muLondon neBristol. Vakabvunza akateerana emibvunzo-yakawanda-sarudzo kutenderedza izvo zvakanaka nezvakaipa zvemukati zvinotaridzika uye zvakagadzira infographic kuratidza mhedzisiro:
Tags: vanyoraZvakajekaContent Marketingkubatanidzwa bloggingpatanimifananidzoMarketingKushambadzira Vhidhiyozvemagariro midhiya zvemukatistratten craigTekinoroji / InternetchinyorwaVideo content
Anoshanda Ekushambadzira Kufanotaura kune Kuronga kwa2015
KISSmetrics Inoburitsa Inonyatsoburitsa Nzira Mushumo